Benza iSan Franciso Sound iyodwa
Uluhlu lwe-A-list njenge-Grateful Dead, iJefferson Airplane, i-Country Joe kunye neNtlanzi, iSanana kunye noSteve Miller Band ziphakathi kwemimandla eyaziwa kakhulu neyona mpu melelo yeSan Francisco Ilizwi leliwa e-60s.
Ngaphantsi kweso sithathu kwakukho okuthandwa yi-Moby Grape, i-Beau Brummels, i-Youngbloods, i-Blue Cheer kunye ne-Quicksilver Messenger Service abafumana ukwanela ngokubanzi kwamazwe kumagama aqhelekileyo.
Kwaye kukho iindidi zamaqela awazange abe nolwazi olucacileyo, kodwa ngubani owayeyinxalenye yecala lokuphuhlisa nokugcina iSan Francisco Sound .
Phakathi kowe-1967 no-1971 lo mbhalo ochazwe ngokuthi "iqela lase-San Francisco yecala" laliyindawo ejikelezayo, kubonakala kwiindawo ezinjenge-Filmore West, iAvalon ne-Winterland. Nangona benza i-studio yokurekhoda, ayikho i-singles okanye i-albhamu yakhululwa ngexesha lobukho bendawo. Kubi Kodwa Uyakuyithenga , ephethe i studio engaxhaswanga kwaye irekhoda eziphilayo zikhutshwa ngo-2004.
UJeff Blackburn kunye noSherry Snow baxhunyaniswe ngokobugcisa nangokwenyama, ukuqala ngo-1965. Sisiphi isaziso esincinane esasifumana ngaphandle kwe-Bay Area sasino-single, "iSiganger Kwilizwe elinqabileyo," elalibhalwa nguDavid Crosby (esebenzisa uSamuel F U-Omar) xa wayeneTherrr. Iqhwa likhupha isibonelelo sokutshintsha uSigne Anderson njengoJefferson Airplane. I-Blackburn ne-Snow iqhekeza emva nje kokuba ubudlelwane babo buphelile ngo-1967. Emva koko uBlackburn wajoyina i-Moby Grape, kunye ne-Snow ekugcineni washiya ishishini lomculo. Iingoma ezimbini eziye zakhishwa ngo-1966 kunye neye-18 nezinye iingoma ezangekho ngaphambili ezenziwe yinto enhle yeNtloko yakho , yakhululwa ngo-1999.
I-Butch Engle kunye ne-Styx
Le bhanti yeBay Area ikhutshwe nje kuphela ama-singles amathathu (omnye wabo phantsi kwegama i-Showmen) phakathi ko-1964 no-1968. Phantse zonke iingoma zabo zabhalwa nguRon Elliott weBeautiful Brummels, eziseleyo ezingazange zenzeke ukufakwa kwiBrummel albhamu. Nangona iqela lika-Engle laliyintandokazi kwesekethe yecandelo lebhunga, ifom yezinto ezirekhodiweyo ayizange isebenze, kwaye i-band yaqhekeka ngo-1968. Ukuhlanganiswa kweengoma zabo kunye namanani amaninzi angakhange ahlanjululwe akhululwa njengeNobangela Yokuba Uthi: I-Best of Bruce Engle kunye ne-Styx ngo-2000.
I-Charlatans yayingenye yeengqungquthela zokuqala zamatye e-psychedelic ukuvela kwisithili saseHaight-Ashbury. Babenempembelelo enkulu kulabo abalandelayo, nangona kunjalo ngenxa yeengubo zabo ezingenasiphelo kunye nomsebenzi njengomculo wabo, oye wanyamekela kwi-jug band blues. I-albhamu yabo enegama elibhaliweyo ayizange ikhutshwe ngowe-1969, ngelo xesha babesemkhawulweni. I-Charlatans yabuyiselwa kwi-CD ngo-1996.
Igama elilodwa lingafanelekiyo elithile lokuchongwa phakathi kwiseti ye-psychedelic. Ngokwemculo, ke, i-Chocolate Watchband yaxhomekeka ngakumbi kwilaphu ye-punk kunengxondorha yengqondo. Umphathi wabo wayeziva kukulungele ukuhlawula kwi-Flower Power craze, ngenxa yokokuba ukurekhodwa kwabo (okwakusemva kokuveliswa ukulandelelana kwengxolo ye-psychedelic) kwakungekho okufana nento leyo ibhanki efana ngayo nokusebenza ngokusebenzayo. Ukungqubuzana rhoqo kunye nolawulo kunye nokuphindaphindiweyo kwabasebenzi abaphambili ngokuphelela ngokukhawuleza kwi-band. Ngo-2005, i-disc-set disc, i- Melts In Your Brain ... Akukho kwi-Wrist yakho: I-Record Complete 1965 ukuya ngo-1967 yazisa yonke into ebhaliweyo ibhaliswe ndawonye kwiphakheji enye.
Igama lebhanki ngokuqhelekileyo lithatha iziqalo ezingenanto, de uze ubhekise ingoma enye eyayibafunyenwe nayiphi na into engacatshulwayo, "Impendulo yeengqondo." Emva kokuba elinye lifikelele phezulu njenge-# 5 kwi- chart ebhaliweyo ye-Billboard, i-Count Five iqhutywe ukulandelelana ne-albhamu, eyayidla ngokukhawuleza njengokuba enye ivukile. Ngenxa yokuba amalungu eqela azimisele ukuhlala kwikholejini ukuze agcinwe ukulungiswa kwazo, abazange babe nexesha okanye iinjongo zokuqhubeka njengeqela elibi. Inguqu edibeneyo ye-albhamu ye-albhamu ye- Psychotic Reaction yakhululwa ngo-1999.
UDani Hicks wayelungu leBail yokuqala ye-psych rock band, iCharlatans, ngaphambi kokushiya ukwenza iDan Hicks kunye ne-Hot Hot Licks ngo-1968. Isandi sakhe somculo sasisekelwe kumculo wesintu kodwa saquka izinto ze-jazz nelizwe. Ngo-1973 iTroventi yokugqibela eya eHicksville yayiyi-albhamu yesine yebhanti kodwa yileyo ekugqibeleni yabazisa ngokugqithiseleyo ngaphaya kweSan Francisco. Kwaye njengoko nje iqela likhuphuka, iHicks yayivala, ekugqibeleni iqhubela phambili ekuhambeni komsebenzi kunye nokuhlakulela inkolo emva kokuzinikela komculo womculo.
U-Dino Valente (naye uphethiweyo uValenti) wayengumdlali oyi-Chet Powers, owayeyilungu lokuqala le-Quicksilver Messenger Service kwaye wabhala i-Youngbloods "hit Together". I-albhamu yodwa ye-Valente / Amandla yedwa yakhishwa ngo-1968, kungekudala emva kokugqiba ukukhonza ixesha lokubanjwa kwirejista. Iqiniso eli lizwi lakhe lokucula alikho konke okwakubaluleke kakhulu ukugcoba kwi-studio kwaye igqitywe ngamazwi kunye namalungiselelo omculo. Ngokuqinisekileyo yayinempembelelo enkulu kwiSan Fransisco Sound, nangona kunjalo, yayinguye ingoma yakhe. Ukongeza kwinto ethi "Hlangana," naye wabhala ezininzi iingoma kwi-albhamu ye-Quicksilver ka-1970, i- Fresh Air , esebenzisa enye into engabonakaliyo, uJese Oris Farrow.
Uhlobo loNtsapho lwalwakhiwa ukusuka kwiindawo zokuhlala ezigaraji ze-Bay, i-Ratz kunye ne-Brogues. I-albhamu yabo yesibili, i- Miss Butters (1968) yabonisa impembelelo kaHarry Nilsson, owayethathe ibhande phantsi kwephiko lakhe. I-albhamu yabo yayidunyiswa ngabanye, bagxekwa ngabanye abavakalelwa kukuba bafana ne-Beatles ' Sgt. Iqela leClub leLoyely Hearts Club . Lo mzekelo omhle waseLan Francisco ngonyameko lwengqondo.
I-Hose yesiqingatha yesiqingatha sasuka phakathi kweSan Francisco amaqela angama-psychedelic rock ngoba kwakungekho enye. Kwakuyi-avant-gard garde, i-experimental, i-electronic band. Ubhala u-Richie Unterberger kuwo wonke uMqondiso weMculo , umseli weBork Marcheschi "owakhe isakhelo sekhompyutheni ehlanganisene nezinto ezinjengeenkomfa, iibhokisi zebhokisibhokisi, ityhubhu yekhadibhodi kunye nesithethi kwi-World War II." Nangona babengenakufumana i-radioplay ngisho nakwizitishi zangaphantsi, babemkelwa ngabadlali be-psychedelic ngenxa yokuba bathatha amathuba, bazama, kwaye babecala ngokungathintekiyo. I-albhamu yabo kuphela, uCauldron wakhululwa ngo-1968.
Ukuqwalasela ukuba ngubani odlala kwi-band, i-Frumious Bandersnatch (igama elivela kwisidalwa kwisibongo sika Lewis Lewis, "Jabberwocky") kwakufuneka ukuba ihlale ixesha elide kwaye lirekhode ngaphezu kwayo. Ngethuba lobomi babo obuncinane (1967-69) iqela likhishwe nje ingoma ephambili ye-EP, kwiilebula zabo. Ngesinye isikhathi, elinye iqela libandakanya uRuss Valory noGeorge Tickner, ababa ngamalungu oLwendwela, kunye nabangaphantsi kwamane amalungu eSteve Miller Band - Valory, uDavid Denny, uJack King noBobby Winkelman. Iingoma ezaneleyo zifunyenwe ukuba ziqokelele Ingoma Yoweselula ngo-1996.
Emva kokudlala nabanye abantu baseSan Franciscans uJerry Garcia, uJanis Joplin nabanye, i-violinist yamawala i-David LaFlamme yakha i-Beautiful Day ngo-1967. I-albhamu yokuzibiza eyi-bongo eyayibizwa ngo-1969, ifunwa ngabaqokeleli ngenxa yesikhombi sayo sobuciko . I-albhamu iqulethe into esondeleyo ibhanki efunekayo, "i-White Bird." Iimbali ezimbalwa kamva, uLaFlamme wabuyela ekusebenzeni namanye amaqela.
Ngebhanki erekhode enye i-albhamu, idlala ibhontshana elincinci lemiboniso ephilayo, kwaye yaphela iminyaka kuphela, i-Kak iye yavelisa umdla omkhulu phakathi kwabaqokeleli kunye nabadumi beembali bamaSan Francisco. Umculi weengoma kunye nombhali oyintloko wokubhala ingoma uGary Lee Yoder wazama ngokukhawuleza umsebenzi we-solo, waza wajoyina iqela laseBay, iBlue Cheer. I-albhamu enye kunye ne-albhamu ene-self-titered, kunye nedemo yesibhonasi kunye ne-Yoder solo tracks, yakhululwa ngo-1999 njengo- Kak-Ola .
Umculo Wendawo yokuLawula wawuyingxube yecala ye-R & B, i-jazz, i-blues, kunye nedwala le-psychedelic. Oku kwenza ukuba kube ngumsebenzi ovulelekileyo wokuvula abaculi abafana neCream kunye noJanis Joplin. Ngelishwa, isibheno seendlela zabo ezibukhoma abazange baphathe kwi-albhamu yabo yokuqala (kunye neyokugqibela), kwaye bahlukana emva kweminyaka emithathu (1967-70.) Umsunguli wenkundla uPaul Fauerso (amazwi, iikhibhodi) kamva wakhiqiza I-albhamu yaseBlue Boys ' First Love . ULinda Tillery owayengumholi wezakhono uqhubekele ukuphumelela kwimizi ngemizi.
Umculo Wokukhethwa Kwezinto
Ukungafani kwakubonwa njengento entle eSan Francisco kwii-60s, kwaye phakathi kwezinto ezingaqhelekanga zeemigodi, akukho nto yayingavamile kunomlambo iMad. Babesemncinci omncinci, ncinane encinci, kwanelizwe elincinci. Ngoko, abalandeli be-psychedelia babathanda. Bakhulula ezimbini ii-albhamu, iMlam River ngo-1968 kunye neParadesi yeBarad & Grill ngo-1969. Bobabini bekhishwa kwi-CD enye ngo-2000.
UMojo Men (omnye wabo, umculi uJan Errico, wayeyindodakazi) wayenomhlaba owodwa nje, isembozo sikaStephen sasihlala 'Hlala phantsi, Ndicinga ukuba Ndiyakuthanda' ngo-1967. yaveliswa nguSly Stone. Nangona bebengakhange bakwazi ukunqumla imarike kazwelonke, umsebenzi wabo orekhodiweyo unikezela isampuli esimele sineendlela ezahlukeneyo eziseSan Francisco Sound.
Okumangalisa kukuba, Umkhangeli wam Mystery wawungathandi nantoni nomculo we-psychedelic ukuba amanye amaqela e-Bay Area adlala kuma-60s. Apho abanye bebenokuphucula, bexhamla, kwaye bazama, umculo webhanki wawuqulunqwe ngokuqinile. Enyanisweni, baqala njengebhanki ye-R & B. Nangona kunjalo, bahlala bexhamla ngeendiza ze-psych-rock ezifana ne-Charlatans kunye ne-Great Society kwaye bakhululwa omnye ongaphantsi ophumeleleyo. Yonke imisebenzi yabo ebhaliwe, kubandakanywa neminye idemos ebhaliswe kumakhaya omalungu ebandla, yakhululwa ngo-1999 kwi-albhamu, Ngoko ke ndivuyayo .
Njengamaqela amaninzi angama-60 e-Bay Area phakathi kwee-60s, i-Oxford Circle yayithandwa kakhulu kwicandelo leeklabhu yendawo, kodwa ayikwazanga ukuthenga umhlaba. Isandi sazo sasijonge kwi-punk kwaye sasinomdla we-blues-oriented. Umqhali weengoma, uGary Lee Yoder, waqhuba kunye namaqela aseSan Francisco, kunye neBlue Cheer eyaziwayo. I-Oxford Circle ikhuphe enye kuphela, kodwa ukusebenza okusebenzayo kwi-Avalon Ballroom kukhishwe ngo-1997.
I-Seatrain yasekuqaleni isekelwe kwisixeko saseNew York (kwaye yayibizwa ngokuba yiProjekthi yeBlues) kodwa yafudukela kwiphondo lasekhohlo. Njengombulelo ofileyo, umculo wabo wawuchukunyiswa kakhulu ngezinto eziqhelekileyo, idwala, i-bluegrass kunye ne-blues. Ngokungafani neendidi ezininzi ze-SF zexesha, i-Seatrain yakhulula ii-albhamu ezine phakathi ko-1968 no-1973. Babini kubo, i- Seatrain ne- Marblehead Messenger (eyenziwa ngumvelisi weBeatles, uGeorge Martin) bakhululwa kwiphakethi enye ngo-1999.
Amadodana ase-Champlin angabamba irekhodi lobomi bexesha elide kunye ne-discography phakathi kwamaqela e-Bay Area 'ama-60s. Bakhulula ama-albhamu asixhenxe phakathi ko-1969 no-1977. Bahlangana ngo-1997 kwaye bakhululwa i-albhamu ephilayo kunye ne-albhamu entsha ye-studio ukususela ngoko. Enye yezinto ezahlukileyo zebhanki yayikusetyenziso lweempondo, okwakunjalo ngexesha elithile. Akumangalisi ke ngoko, ukuba uMsunguli uBill Champlin waqhubeka nomsebenzi kunye neChicago. IsiXeko seFat sabhalwa ngo-1966 no-1967 kodwa asizange sikhululwe ngo-1999.
I-Sopwith Camel yazinzisa ngokwaba ngowama-60 e-San Francisco amaqela ekuhlaleni i-Top 40 hit, i-sound tune, Sawubona, Sawubona . Isandi sazo sasingekho kwi-psychedelic, esigijimela kwi-rock-rock-light. I-albhamu ye-bbut ye-self-titled ye-band iqalwe ngo-1967. Baqhekeza ngaloo nyaka xa bengenako ukuphinda impumelelo yomntu omnye. Ukuguqulwa ngo-1971, bakhululwa enye i-albhamu ngaphambi kokuba baphinde baphuke ngo-1974.
I-1966 yabo engatshatanga, "Intombazana encinane" yayisisigxina seNkcazo yodwa yongqingileyo yesizwe. Bawabetha i-albhamu kwiiveki ezimbalwa kwaye bajikeleza ngokubanzi ngamaqela afana ne-Rolling Stones kunye neeYardbirds. Iingoma ezintathu ezingaphumelelanga kunye nesaziso esibhaliweyo esasitholwe ngumqhubi webhendi saholela ukuhlukana ngo-1970. Nangona abazange baphule isizwe, isandi sesandi ngokuqhelekileyo sithathwa njengeyona nto yimpembelelo enkulu kwinto eyaba yindwala ye-psychedelic.
UMbutho Omkhulu wawujongene noGrace Slick ngaphambi kokuba athuthe eJefferson Airplane. Abaculi beSolo bafana noJanis Joplin (uMzalwana Omkhulu kunye neNkampani ye-Holding) kunye noTracy Nelson (uMama weMhlaba) baba nolwazi olubhetele ngakumbi kunamaqela abavela kuwo. I-Warlocks yaba ngumbulelo. I-Tikis yayingaziwa ngaphandle kwe-Bay Area, kodwa ibhalwa i-national hit single, "59th Street Bridge Song" ngo-1967, isebenzisa igama elithi Harper's Bazaar.
Kwaye kwakukho iinqununu ezingazange zibe neengxelo ezirekhodiweyo, azizange zitshintshwe ngokungaqhelekanga, azizange zityhuke: I-Vejtables, Amanqaku avela ngaphantsi komhlaba, Uvuko lwamaSulumane, Izwe lezulu, uLuther Pendragon, kunye nokuBula ukuBulala ngabanye bambalwa kodwa unendawo ehlala kwimbali yeSan Francisco Sound. Kaninzi "
I-Heuristics kwi-Rhetoric kunye noBumbe